Baolina kitra : Nataon’ny Barea veloma ny Londres 2012
Niverina nangatsiaka indray i Mahamasina. Iray minitra latsaka nanombohan’ny lalao teo amin’ny Barean’i Madagasikara sy ny Fennecs Alzerianina dia nikobana sahady sahady ny haraton’ny Malagasy.
Tsy ampy nanarenana intsony ny faharesena goavana nahazo antsika tany aminy sy io isa tokana io intsony ny 89 minitra sisa nilalaovana omaly, tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina. « Vao maraina loatra ny baolina matin’izy ireo ka vao mainka nampisokatra ny ferin’ny faharesena tany aminy », hoy i Frank Rajonarisamba, mpanazatra nasionalin’ny Barea latsaky ny 23 taona, mifaninana eo amin’ny fifanintsanana hiatrehana ny lalao olympika any Londres.
Olana teo amin’ny famerenam-baolina nataon’i Jean Bosco (Ascum) no nahatonga ity baolina maty ity. Saika mpilalao avy any amin’ny faritany, tsy mbola ampy traikefa eo amin’ny lalao iraisam-pirenena, avokoa no napetraka ho eo amin’ny sisiny eo amin’ny vodilaharana tamin’ity. Nahatonga fimenomenomana teo amin’ireo mpijery ny fahadisoana matetika niseho teo amin’izy mirahalahy tamin’izany.
Nohamafisin’ny mpanazatra rahateo taorian’ny lalao ny tsy fahampian’ny traikefa ho an’ireo mpilalao iraisam-pirenena. « Sambany no nilalao teo Mahamasina tamin’ny lalao iraisam-pirenena izy mirahalahy ireo. Ny mety ho fisian’ny harerahana teo amin’i Léonard no nahatonga anay teknisianina tsy hampijoro azy ho tompon-toerana tamin’ity.
Lalao efatra nifanesy no nataony tao anatin’ny tapa-bolana ka napetrakay ho herin’ny mpisolo toerana izy », hoy izy. Isan’ireto mpilalao nahazo ny siotsiokan’i Mahamasina omaly i Tony Mamodali, izay hany mpila ravinahitra tonga tamin’ity lalao miverina ity.
« Tsy mitovy tamin’ny filalaony tany Alzeria ny nasehony teto. Amin’ny manaraka dia ilaina ny mifanerasera amin’ireo teknisianina any ivelany manazatra an’ireny mpila ravinahitrantsika ireny. Efa niseho ny tahaka izao tamin’i Sedera Andriamparany tany Alzeria », hoy ihany ity mpanazatra ny Barea latsaky ny 23 taona ity.